Kusuka ku-MySQL kuye eMaria DB: Umhlahlandlela Wokufuduka Ngokushesha we-Debian | Kusuka kuLinux
Lapho umkhiqizo osebenzayo futhi okhokhelayo, futhi lowo ungumthombo ovulekile, ungena ezandleni zenkampani inhloso yayo okungeyona enye ngaphandle kokwenza imali eyengeziwe, umhlaba uyathuthumela.
Sekuvele kwenzeka nge I-OpenOffice ngaleso sikhathi futhi manje sekuyithuba le- MySQL. Ukunikeza ku Oracle ngemuva akekho owaziyo okungenzeka futhi kuhle ukwazi ukuthi kunezinye izindlela futhi ikakhulukazi okuhle kunakho konke UMaria DB.
MariaDB Kuyinto a uhlelo lokuphathwa kwemininingwane egciniwe isuselwe kwi MySQL con Ilayisense ye-GPL. Kuthuthukiswa ngu UMichael Widenius (umsunguli we MySQL) nomphakathi wonjiniyela software free. Faka ezimbili izinjini zokugcina okusha, omunye ubiziwe Aria -okungena esikhundleni sezinzuzo I-MyISAM- nolunye ucingo I-XtraDB -ukufaka esikhundleni InnoDB. Inokusebenzisana okuphezulu ne-MySQL ngoba inemiyalo efanayo, izixhumi ezihlangene, ama-API kanye nemitapo yolwazi, inhloso yayo ukukwazi ukushintshela iseva eyodwa iye ngqo.
Ngakho-ke ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado ake sibone ukuthi singasuka kanjani MySQL a UMaria DB.
Kubalulekile ukwazi ukuthi ukuze lokhu kusebenze nge-100%, kufanele sibe nohlobo olufanayo lwe-MySQL (5.5) neMaria DB (5.5)
Ukufuduka kusuka ku-MySQL kuye eMaria DB
Le nqubo ayikwazi ukwenziwa ishise. Ngamanye amagama, kufanele simise isikhashana izinsizakalo nezinqubo zethu ezisebenzayo MySQL.
Kulokhu simisa i-Apache noma i-NGinx kuye ngokuthi sisebenzisa yiphi, futhi-ke simisa ne-MySQL.
Kamuva senza isipele sedatha yethu ye-MySQL:
Futhi sisusa wonke amaphakheji ahlobene ne-MySQL:
Manje kufanele sifake uMaria DB. Ngeshwa, ayikho ezinqolobaneni zeDebian okwamanje, kepha singayifaka sisebenzisa amakhosombe ayo. Ngokunye ukwabiwa, ungabona i- imiyalo lapha.
Sengeza okulandelayo kufayela lethu le- /etc/source.list:
Uhlu lokugcina lweMariaDB 5.5 - lwakhiwe 2013-08-02 13:48 UTC # http://mariadb.org/mariadb/repositories/ deb http://ftp.osuosl.org/pub/mariadb/repo/5.5/debian wheezy okuyinhloko kwe-deb-src http://ftp.osuosl.org/pub/mariadb/repo/5.5/debian wheezy main
Ngemuva kwalokho sivuselela futhi sifake uMaria DB:
ukuvuselelwa kwesudo apt apt fumana ukufaka mariadb-server
Siqala iMaria DB (uma ingakwenzanga ngokuzenzekelayo) bese ubheka ukuthi iyasebenza:
# mysql -u impande -p -Be 'bonisa imininingwane yolwazi' Faka iphasiwedi:
Ezinye izilungiselelo zishintshe kakhulu phakathi kwe-MySQL neMariaDB, kepha kulula kakhulu ukusebenza nayo. Cishe konke okuguqukile kuhlobene nezinqubo ezifakwe esikhundleni, isibonelo, ukuphindaphindeka. Kumele sikopishe kuphela izinketho zokwenza kahle ukusebenza ebesinakho kufayela my.cnf de MySQL, uphinde ulungise kabusha okunye ngesandla.
Isibonelo, le datha:
Senza izinguquko ezidingekayo bese siqala kabusha iMaria DB.
# service mysql restart Ukumisa iseva yedatha ye-MariaDB: mysqld. Iqala iseva yedatha ye-MariaDB: mysqld. . . Ihlolela ukonakala, hhayi ukuvalwa ngokuhlanzekile nokuthuthukisa amatafula adingekayo .. # mysql -u root -p -Be 'show database' Enter password:
Yebo, UMaria DB gcina igama elifanayo le-mysql ukuqala kabusha insiza, ukuze ugcine ukuhambisana okungcono. Uma konke kuhamba kahle, khona-ke siqala ezinye izinsiza:
# service apache2 qala # service nginx qala
Futhi ngomumo. Uma sifuna ukubuyela emuva (engingakuncomi), kufanele nje sigijime:
# service mysql stop # apt-get mariadb-server-5.5 mariadb-common mariadb-client-5.5 libmariadbclient18 # apt-get ukufaka i-mysql-server
Umthombo: I-Article ithathiwe futhi yaguqulwa kusuka ku-StartLinux
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » I-MySQL eya eMaria DB: Umhlahlandlela Wokufuduka Ngokushesha we-Debian
Njengoba umthwalo wesipele sedatha ungekho.
Angicabangi ukuthi kunjalo, kodwa ngiyabonga ngokucaciswa. Senze isipele uma ngabe i-Database yamanje ihluleka, ngoba kubonakala kimi ukuthi bobabili basebenzisa i-DB efanayo. Kuzofanele ngifunde kabanzi ngale ndaba.
UFedora 19 usevele uza noMaria ngokuzenzakalela, kepha hhayi okufishane noma okuvilaphayo ngithuthele ama-web-apps ami ngiwafaka ePostgreSQL, kwazise iMySQL isishayile izimpondo, ngiyethemba iPostgreSQL ihlala ithembekile okungenani iminyaka engu-2-3.
I-ArchLinux ifaka noMaria DB 😀
Une-vice ye-Arch ... Ngisho nami nginamazinyo axegayo futhi ngifuna ukuwasebenzisa futhi ... kepha ngiyavilapha. 😀
Ngibona ukuthambekela kwezinhlelo kufaka phakathi ukusekelwa kukaMariaDB futhi ngokwalokho engikufundile kubonakala kusezingeni le-MySQL futhi ngaze ngakudlula kwezinye izici, kepha umbuzo wami uthi: iqiniso lokuthi i-Oracle manje isemuva kweMySQL yokufuduka futhi ngakho-ke ngendlela yokulahla umphathi we-bd ohlolwe isikhathi futhi osebenzisa izigidi?
Ushaye khona. Ukusho nje i-Oracle kunesizathu esanele sokuphelelwa i-MySQL. Futhi, iMaria DB imfoloko ye-MySQL egcinwe ngumdali we-MySQL noMphakathi. Angazi ngawe, kepha okungenani lokho kunginika ukuphepha okukhulu. Futhi uma singeza kulokho ukuthi ukuhambisana kuhle kakhulu, ngoba ngicabanga ukuthi azikho izaba zokushintshela kuMaria DB.
Futhi yingakho ngenqaba ukufaka iJava kuDebian yami. Angisebenzisi neze i-OpenJDK nge-IcedTea futhi isebenza kahle, futhi ingcono kuneJava.
Hhayi, ndoda, ngineqiniso lokuthi kufanele ube nezizathu zakho zokuzonda i-Oracle (kunuka njengalezo ezikwenza uzonde iMicrosoft, i-Apple kanye neGoogle) kepha njengoba i-Oracle ingenzanga lutho kimi ... futhi ngicabanga ukuthi ngizokunika i-SPARC yosuku lwakho lokuzalwa lwe-XD
Kubhekiswa ezingeni lesoftware, hhayi ileveli yehadiwe.
Cha, uma sizokuzonda, sizonda konke, lezo zinyathelo ezinhlanu azipholile ... hehehehehehe
Ngiyabonga elav, ngasendleleni, kungakuhle yini ukuthi unamaseva womabili wewebhu futhi uqale ngasikhathi sinye?
Abanye abantu basebenzisa i-Apache njengeseva yewebhu kanye ne-NGnix njengommeleli wezicelo zewebhu. Impi impela. Isibonelo lapho usebenzisa i-Node.js, esebenzisa imbobo evela emuva engasetshenziswa muntu futhi mhlawumbe i-ISP yakho ivimbile
Umfundisi omuhle wokufuduka. Futhi, iSlackware kudala yathuthela eMariaDB ukugwema ukuqhubeka kokudideka nge-MySQL.
Ngokushesha nje lapho kuse-repo yokuphepha yangemuva ye-Debian, ngizoyimemezela ngokushesha okukhulu. Okwamanje ngihlanganisa isifundo sami ekufakeni / ukumisa / ukwenza ngokwezifiso iSlackware.
Kepha ingabe i-kde isencike ku-mysql (ku-debian) noma ngalokhu kufuduka akusadingeki?
Ngakho-ke kulokho ebengikuqonda, lonke uhlelo lokusebenza olulungiselelwe nge-mysql bekungeke ludinga ukuphinda lucubungule noma yini yalo? Vele ufake iMariaDB (bese ukhipha i-mysql) bese ugcina amagama njenge-mysql kufanele isebenze?
Mayelana nokusebenza, kushiwo izinguquko zenjini.
Ngabe benza ngokugqamile ngeMylSam yakudala ne-InnoDB?
Umuntu othile wenze noma yimaphi amamethrikhi?
Ngiqonde haha, Ngiyabonga!
Ngibonga kakhulu! manje uma kucacile kimi; D
Ayikwazi ukusetha iphasiwedi yomsebenzisi we-MariaDB "impande"
Occurred Kuvele iphutha ngenkathi kusethwa iphasiwedi ye-MariaDB │
│ umsebenzisi wokuphatha. Lokhu kungenzeka kwenzeke ngoba i-akhawunti isivele │
│ unephasiwedi, noma ngenxa yenkinga yokuxhumana neMariaDB │
│ iseva. │
Should Kufanele uhlole iphasiwedi ye-akhawunti ngemuva kokufakwa kwephakeji. │
│ Sicela ufunde i- / usr/share/doc/mariadb-server-10.1/README.Debian file │
│ ukuthola eminye imininingwane.
Ngikhiphe amaphakheji we-mariadb maridb-server
Ngisuse umkhombandlela / var / lib / mysql.
3 Iphinde yafakwa kabusha amaphakheji we-Mariadb, Mariadb-server.
systemct qala mariadb; i-systemctl inika amandla i-mariadb (ixazululwe inkinga).
Thuthukisa ngokwakho i-Wordpress 3.6 ngaphandle kokufa emzameni
Sizobuyekeza ku-Wordpress 3.6 kungekudala